AKHRISO: War-murtiyeedka Shirkii Madaxda Galmudug iyo Puntland & Qodobbadii ka soo baxay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRISO: War-murtiyeedka Shirkii Madaxda Galmudug iyo Puntland & Qodobbadii ka soo...
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo shir muddo labo maalin ah uga socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa laga soo saaray qodobbo ay ka mid ahaayeen iskaashi la xiriira dhinaca amniga.
Wasiirka Amniga maamulka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in labada maamul ay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta Midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka Federaalka.
Waxay kaloo isku raaceen, dhinaca Amniga iyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab si gaar ah amniga deegaannada Gobolka Mudug oo mararka qaar ay weeraro kala duwan ka fuliyaan Al-Shabaab.
Galmudug iyo Puntland oo wada maamulada magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal amni darro, iyada oo dhawaan weerar ismiidaamin ahaa lagu dilay Guddoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland AUN Axmed Muuse Nuur Yare.
Iskaashiga Galmudug iyo Puntland